Dhageyso:-Hadalkii Aqalka Sare Ee Xaaf Oo Ka Careeysiiyay Xildhibaano Ka Tirsan Galmudug (Warbixin) | Hobyo Media Online
Dhageyso:-Hadalkii Aqalka Sare Ee Xaaf Oo Ka Careeysiiyay Xildhibaano Ka Tirsan Galmudug (Warbixin)
Xiisad Siyaasadeed oo kacsanaan ah oo soo bilaabatay 26 Bishii September kadib markii ay sheegeen Xildhibaanada galmudug in ay xilka qaadis ku sameeyeen xildhibaano gaarayay 52 Mudane xilka qaadis ku sameeyeen Madaxweyne Xaf ayaa weli taagan.
Waxaana dhanka kale barbar socday Xaaf oo iska diiday xilka qaadistaas isaga oo sheegay in uu yahay Madaxweynaha Maamulka Galmudug.
Xiisada Siyaasaded ayaa sii kacday isla Bishaas 30,keedii kadib markii xildhibaano kale ay sheegeen in ay xilalkii ka qaadeen Madaxweyne ku xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamanka Maamulkaas balse ay xusid mudan tahay in Xaaf uu ka qeyb galay shirar lagu Casuumay Madaxda Maamul Goboleedyada.
Daraad ayaa ugu dambeysay Xaaf ayaa khudbad ka jeediyay kulan ay Madaxda Maamul Goboleedyada la lahaayeen Xildhibaanada Aqalka sare waxa uuna sheegay in loo nabadgeliyo xildhibaanadiisa oo uu ula jeeda kuwa Galmudug sida uu hadalka u dhigay.
Hadalka Madaxweyne Xaaf aya ka careysiiyay qaar ka mid ah xildhibanada Galmudug waxana ka mid ah xildhibaan Garaad Yuusuf Qowqabe Dalsan ayuu la soo xiriiray waxa uuna yiri.